Budata CyberGhost VPN maka Windows
Budata CyberGhost VPN,
CyberGhost VPN bụ mmemme VPN nke na - enye gị ohere ịbanye na ịntanetị na nzuzo site na izochi data nkeonwe gị na njirimara gị. Notu oge ahụ, site nenyemaka nke usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ohere ịnweta ohere na-enweghị njedebe na weebụsaịtị niile ịchọrọ na enweghị mmachi ma ọ bụ mmachibido ọ bụla na ịntanetị.
Na-arụ ọrụ nokpuru OpenVPN protocol dabere na sistemụ zoro ezo SSL, mmemme a na-arụ ọrụ na sava sava echekwara echekwa, na-ezo data nnyefe gị niile, ozi nkeonwe na ọnọdụ ya. Nụzọ dị otú a, ọ na-enye gị ohere iji sọfụ ịntanetị na-enweghị aha.
Esi Wụnye CyberGhost VPN?
Iji jiri mmemme ahụ, ịkwesịrị ịmepụta akaụntụ njirimara nkeonwe gị wee banye na mmemme ahụ jiri akaụntụ onye ọrụ ịmepụtara. CyberGhost VPN, ebe ị nwere ike ịmepụta akaụntụ onye ọrụ nefu, na-enye ndị ọrụ ọrụ ndebanye aha dị mfe.
CyberGhost VPN Atụmatụ
Mgbe ịbanye na akaụntụ nke aka gị na mmemme ahụ, nke nwere njirimara ọrụ dị mfe, nke oge a na nke dị mfe iji, ị nwere ike ịhọrọ obodo ma ọ bụ adreesị IP ịchọrọ ịbanye na ya, pịa Jikọọ na VPN bọtịnụ, mee ntọala njikọ dị mkpa ma malite sọọfụ na-enweghị aha site na ijikọ na sava VPN. can nwere ike ịmalite.
Site na ịhọrọ otu nime sava VPN na mba ọ bụla ịchọrọ site na listi nkesa, ị nwere ike ịchọgharị na ịntanetị ejikọrọ na sava nke mba ahụ. Noge a, ndị ọrụ Turkey na-ahọrọ otu nime sava ndị dabeere na Germany ga-enye ha ohere ịchọgharị na ịntanetị ọsịsọ na ntụkwasị obi.
Mgbe ijikọ na VPN sava, ị nwere ike ịlele adreesị IP ọhụrụ gị na ọnọdụ gị ugbu a na isi ihuenyo nke usoro ihe omume ahụ. Mgbe ahụ ị nwere ike ịga nihu na-eji ịntanetị kpamkpam na ntụkwasị obi.
CyberGhost VPN na-ehichapụ akụkọ ihe mere eme na kuki na-akpaghị aka, nyochaa nkwenye paswọọdụ, na-enyocha mgbasa ozi email zigara, na-eme ka njikọ intaneti gị dị nchebe karị.
Ọ na-enye ihe ngwọta dị irè maka ndị ọrụ ịntanetị niile chọrọ ịnweta saịtị egbochiri ma machibido iwu kpamkpam, gbochie ozi nkeonwe na izu ohi data, were nchekwa ịntanetị gị na ọkwa ọzọ ma chọgharịa na-enweghị aha.
CyberGhost VPN Ụdịdị
Mmepụta: CyberGhost SRL
Avira Free Antivirus bụ antivirus dị ike nefu maka ndị ọrụ chọrọ ichedo kọmputa ha megide nje,...